Appropriate Age For Your Child To Start School - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Appropriate Age For Your Child To Start School
သငျ့ကလေးကို ဘယျအခြိနျမှာ ကြောငျးစထားမလဲ?
ကလေးတဈယောကျ အသကျ လေးနှဈကြျောလို့ ငါးနှဈထဲဝငျလာပွီဆိုတာနဲ့ မိဘတှဟော ကြောငျးစထားဖို့ စဉျးစားလရှေိ့ကွပါတယျ။ အသကျငါးနှဈမပွညျ့ခငျ ကြောငျးစောစောထားခငျြတဲ့ မိဘအခြို့လညျးရှိပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ပညာတတျစလေိုလှတဲ့ဆန်ဒနဲ့ ကြောငျးစောစောပို့ခငျြစိတျကို ခဏဖယျထားပွီး ကိုယျ့ရဲ့ကလေးဟာ ကြောငျးထားဖို့ တကယျအဆငျသငျ့ဖွဈမဖွဈ ဆုံးဖွတျနိုငျဖို့ ပိုလိုအပျပါတယျ။ အဲလိုဆုံးဖွတျဖို့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့အခကျြလေးတှေ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
ကလေးတဈယောကျ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးတယျဆိုတာ သူ့ရဲ့ တဈကိုယျရညျကိစ်စလေးတှေ လုပျနိုငျတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ အပေါ့အလေးသှားခွငျး၊ သူမြားခှံ့ကြှေးစရာမလိုဘဲ ကိုယျတိုငျထမငျးစားနိုငျခွငျး၊ လကျဆေးခွငျး၊ နလေ့ညျခငျး နားခြိနျ တဈရေးတဈမောအိပျခိုငျးတဲ့အခါ ကောငျးကောငျးအိပျခွငျး အစရှိသဖွငျ့ လုပျကိုငျနိုငျတာတှပေါ။
ကလေးဟာ မိဘနဲ့အခြိနျပွညျ့မနရေဘဲ ကလေးထိနျး သို့မဟုတျ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှနေဲ့ အိမျမှာနရေတယျဆိုရငျ ကြောငျးပို့ရတာ သိပျအခကျအခဲမရှိပါဘူး။ တကယျလို့ မိဘနဲ့အခြိနျပွညျ့နရေတယျဆိုရငျ တဈပတျမှာတဈခါ အဘိုး၊အဘှား အိမျပို့ပေးတာမြိုး ၊ ဆှမြေိုးအိမျကို အလညျချေါသှားပေးတာမြိုးနဲ့ အလအေ့ကငျြ့လုပျလို့ရပါတယျ။
*ကလေးဟာ အခြိနျစာရငျးနဲ့ နသေားကပြွီလား
ကြောငျးတှမှော စာသငျခြိနျ၊ ထမငျးစားခြိနျ၊ နားခြိနျ၊ ကစားခြိနျ စသဖွငျ့ အခြိနျစာရငျးအတိအကရြှိပါတယျ။ ကလေးမြားဟာလညျး သူ့အခြိနျနဲ့သူ ကစားရ၊စာသငျရတာကို သဘောကတြတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကလေးက ဒီလိုအခြိနျစာရငျး အတိအကနြဲ့ လညျပတျနတောကို နသေားမကတြာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကိုလညျး အလအေ့ကငျြ့လုပျပေးလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ ဒီနဘေ့ယျအခြိနျရခြေိုးပေးမယျ ရကေစားမယျ ညဘကျကိုဒီအခြိနျပုံပွငျပွောပွမယျ အရုပျဆကျကွမယျ စသဖွငျ့ အခြိနျဇယားနဲ့ရငျးနှီးလာအောငျ လကေ့ငျြ့လို့ရပါတယျ။
ကြောငျးအမြားစုဟာ မနကျကနေ ညနခေငျးထိ တကျရတာဖွဈပါတယျ။ ကလေးငယျမြားဟာ ကြောငျးမှာသူ့အခြိနျနဲ့သူအလုပျလုပျရတာဖွဈတဲ့ အတှကျ ကလေးဆိုသျောလညျး အထိုကျအလြောကျ ပငျပနျးပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ ကလေးဟာ ကနျြးမာရေးကောငျးနဖေို့လိုပါတယျ။ မနကျစောစောထနိုငျဖို့အတှကျ ကလေးကို ညစောစောအိပျစတေဲ့အကငျြ့ ပွုလုပျထားပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။
*ကလေးဟာ အစုအဖှဲ့နဲ့ ကောငျးမှနျစှာနတေတျပွီလား
ကြောငျးမှာ အုပျစုလိုကျပွုလုပျရတဲ့ အလုပျတှအေမြားကွီးရှိပါလိမျ့မယျ။ ဝိုငျးဖှဲ့သီခငျြးဆိုကွတာ၊ ပုံဆှဲကွတာ စသဖွငျ့ အမြားနဲ့တူတူလုပျရတဲ့ အရာလေးတှကေို ရငျးနှီးနဖေို့လိုအပျပါတယျ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ကတော့ ဘာကွောငျ့ ကလေးကို ကြောငျးထားခငျြနပွေီလဲဆိုတဲ့ သငျ့ရဲ့စိတျပါပဲ။
ကလေးဟာ အထကျဖျောပွပါ အခကျြတှလေညျး ပွညျ့စုံနပွေီဆိုရငျ သငျကြောငျးထားခငျြတဲ့စိတျပျေါလာတာ မှနျပါတယျ။ တကယျလို့ ကလေးဟာ အသကျငါးနှဈပွညျ့ပွီးဖွဈပမေယျ့ ကြောငျးထားဖို့ အပျေါကအခကျြတှနေဲ့ လုံးဝမကိုကျညီသေးဘူးဆိုရငျတော့ ဆန်ဒမစောစခေငျြပါဘူး။
မိဘတှအေနနေဲ့ မိမိကလေးကို ကြောငျးထားဖို့အဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့အထိ ပွငျဆငျပေးသငျ့ပါတယျ။ ကြောငျးနဖေို့အဆငျသငျ့လုံးဝမဖွဈသေးတဲ့ကလေးကို အမြားနညျးတူ သှားကိုသှားရမယျဆိုပွီး ဇှတျအတငျးကြောငျးထားတာဟာ ကလေးရဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ ကလေးကို အသကျတဈနှဈစောပွီး ကြောငျးထားလို့ သူ့အနာဂတျ ပိုလှမသှားပါဘူး။ တဈနှဈနောကျကပြွီးမှ ကြောငျးထားလို့လညျး သူ့အနာဂတျအရုပျဆိုးမသှားပါဘူး။
ကလေးဟာ ကြောငျးသှားဖို့အဆငျသငျ့ဖွဈမဖွဈကို အထကျဖျောပွပါအခကျြတှနေဲ့ ခြိနျထိုးစဉျးစားစခေငျြပါတယျ။ အသကျငါးနှဈဝနျးကငျြကလေးတဈယောကျဟာ ကြောငျးသှားဖို့အတှကျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာရော ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာပါအဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့အခြိနျသညျသာလြှငျ ကြောငျးစထားဖို့အသငျ့တျောဆုံးအခြိနျပဲဖွဈပါတယျ။
သင့်ကလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ကျောင်းစထားမလဲ?
ကလေးတစ်ယောက် အသက် လေးနှစ်ကျော်လို့ ငါးနှစ်ထဲဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ မိဘတွေဟာ ကျောင်းစထားဖို့ စဉ်းစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အသက်ငါးနှစ်မပြည့်ခင် ကျောင်းစောစောထားချင်တဲ့ မိဘအချို့လည်းရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပညာတတ်စေလိုလှတဲ့ဆန္ဒနဲ့ ကျောင်းစောစောပို့ချင်စိတ်ကို ခဏဖယ်ထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဟာ ကျောင်းထားဖို့ တကယ်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲလိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်ကိစ္စလေးတွေ လုပ်နိုင်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ အပေါ့အလေးသွားခြင်း၊ သူများခွံ့ကျွေးစရာမလိုဘဲ ကိုယ်တိုင်ထမင်းစားနိုင်ခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ နေ့လည်ခင်း နားချိန် တစ်ရေးတစ်မောအိပ်ခိုင်းတဲ့အခါ ကောင်းကောင်းအိပ်ခြင်း အစရှိသဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်တာတွေပါ။
ကလေးဟာ မိဘနဲ့အချိန်ပြည့်မနေရဘဲ ကလေးထိန်း သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ အိမ်မှာနေရတယ်ဆိုရင် ကျောင်းပို့ရတာ သိပ်အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ မိဘနဲ့အချိန်ပြည့်နေရတယ်ဆိုရင် တစ်ပတ်မှာတစ်ခါ အဘိုး၊အဘွား အိမ်ပို့ပေးတာမျိုး ၊ ဆွေမျိုးအိမ်ကို အလည်ခေါ်သွားပေးတာမျိုးနဲ့ အလေ့အကျင့်လုပ်လို့ရပါတယ်။
*ကလေးဟာ အချိန်စာရင်းနဲ့ နေသားကျပြီလား
ကျောင်းတွေမှာ စာသင်ချိန်၊ ထမင်းစားချိန်၊ နားချိန်၊ ကစားချိန် စသဖြင့် အချိန်စာရင်းအတိအကျရှိပါတယ်။ ကလေးများဟာလည်း သူ့အချိန်နဲ့သူ ကစားရ၊စာသင်ရတာကို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကလေးက ဒီလိုအချိန်စာရင်း အတိအကျနဲ့ လည်ပတ်နေတာကို နေသားမကျတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ဒီနေ့ဘယ်အချိန်ရေချိုးပေးမယ် ရေကစားမယ် ညဘက်ကိုဒီအချိန်ပုံပြင်ပြောပြမယ် အရုပ်ဆက်ကြမယ် စသဖြင့် အချိန်ဇယားနဲ့ရင်းနှီးလာအောင် လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။
ကျောင်းအများစုဟာ မနက်ကနေ ညနေခင်းထိ တက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များဟာ ကျောင်းမှာသူ့အချိန်နဲ့သူအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကလေးဆိုသော်လည်း အထိုက်အလျောက် ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ကလေးဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။ မနက်စောစောထနိုင်ဖို့အတွက် ကလေးကို ညစောစောအိပ်စေတဲ့အကျင့် ပြုလုပ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
*ကလေးဟာ အစုအဖွဲ့နဲ့ ကောင်းမွန်စွာနေတတ်ပြီလား
ကျောင်းမှာ အုပ်စုလိုက်ပြုလုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ ဝိုင်းဖွဲ့သီချင်းဆိုကြတာ၊ ပုံဆွဲကြတာ စသဖြင့် အများနဲ့တူတူလုပ်ရတဲ့ အရာလေးတွေကို ရင်းနှီးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဘာကြောင့် ကလေးကို ကျောင်းထားချင်နေပြီလဲဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်ပါပဲ။
ကလေးဟာ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေလည်း ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင် သင်ကျောင်းထားချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာ မှန်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးဟာ အသက်ငါးနှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကျောင်းထားဖို့ အပေါ်ကအချက်တွေနဲ့ လုံးဝမကိုက်ညီသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဆန္ဒမစောစေချင်ပါဘူး။
မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိကလေးကို ကျောင်းထားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အထိ ပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကျောင်းနေဖို့အဆင်သင့်လုံးဝမဖြစ်သေးတဲ့ကလေးကို အများနည်းတူ သွားကိုသွားရမယ်ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းကျောင်းထားတာဟာ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကလေးကို အသက်တစ်နှစ်စောပြီး ကျောင်းထားလို့ သူ့အနာဂတ် ပိုလှမသွားပါဘူး။ တစ်နှစ်နောက်ကျပြီးမှ ကျောင်းထားလို့လည်း သူ့အနာဂတ်အရုပ်ဆိုးမသွားပါဘူး။
ကလေးဟာ ကျောင်းသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ကို အထက်ဖော်ပြပါအချက်တွေနဲ့ ချိန်ထိုးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ အသက်ငါးနှစ်ဝန်းကျင်ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းသွားဖို့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်သည်သာလျှင် ကျောင်းစထားဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Home Accident Prevention For Children